Doorashada DADBAN: Doorashada Doollarka! – Bashiir M. Xersi
Date: 24 Nov 2016Author: Bashiir M. Xersi 1 Comment
Dalkeenna inta doorasho ka dhacday, ee summad doorasho lagu sheegi karo waa faro ku tiris, ka sokow, ku shubashada, nin dooran doorashada iyo afduubka bulshada, haddana, ma muuqato, siiyaalka dhaw, hab looga baxayo dibnoxirnaantaa.
Doorashadii ugu dambaysay, ee dalka ka dhacday 1967, waxay ku sifowday musuq, laaluush iyo laqdabo, ee aan inyar sooyaalka dib u jalleeco, si aad ogataan, intiinna maanta la yaabban waxa dhacaya, in ay hore u eheed summaad iyo siiro qoran.
Doorashadii ugu horreysay dalka waxay ka dhacday 1960kii midowgii waqooyi iyo koofur ka dib, oo lagu tartamayey 123 kursi, waxaana kuraasta badankood ku guuleystay reer koofur, oo helay 90 kursi, halka reer waqooyigu heleen 33 kursi.
MW Aadan Cabdulle Cismaan (Aadan Cadde) ayaa loo doortay MW, oo hore si KMG ah xilka madaxwayne u sii hayey. MW Aadan Cadde wuxuu ka guleystay Shiikh Cali Jimcaale Baraale.
Doorashadii labaad waxaa la qabtay 30kii maarso, 1964tii, waxaana sidoo kale, kuraasta intooda badan helay xisbigii SYL ee Leegada, oo helay 69 kursi.
Doorashadii saddaxaad waxay dhacday 1967-dii, waxaana xilligaa waa caan baxday, oo uu wargeys Talyaani ah cinwaan ka dhigay sidan; “30 anni, 30 milione” oo ah: “30jir haysta 30 Milyan”. Waa wiil miyiga ka soo rooray, ama laga soo raray, dawladdana dhexda laga galshay, ee lagu yiri; boob lagaa ma xigee, heer asoo soddon jira uu lacag intaa la eg yeesho.
Madaxdii maalmahaa jiray, maadaama ay ka go’need, in ay xukunka ku soo laabtaan, si iyo wax walba ha ku qaadatee, waxay hirgalsheen sharci awood u siinaya wasiirkii arrimaha gudaha, in doorashada sida uu rabo ka yeeli karo. Doorashadaa waxaa ku tartamay 64 xisbi, oo ku tartamayaan 123 kursi, halka murashaxiintu ahaayeen 2214, oo ka dhigan, in halkii kursiba ay u tartameen 18 mrashax. Halkaa waxaan ku noqonnay, waddanka Afrika ugu xisbiyada badan iyo duni ahaan kan labaad. WAALLI!
Dhacdada ugu anfarirka badnayn waxay eheed, markii ay tartameen wiil iyo aabbihii. Wiilku wuxuu u tartamayey is kiis, oo madax bannaan, halka aabbuhu uu ka tartamayey dhanka xukuumadda. Rabshad ka dhacday ayaa wiilkii ku dhintay goobtii doorashada. Odaygii ayaa warkii loo keenay, oo lagu yiri, labo arrin, midna farxad tahay, midna naxdin tahay ayaan kuu wadnaa, ee kee laguu hormarshaa? Wuxuu yiri farxadda ku hormar. Waxaa lagu yiri, waad ku soo baxday kurgsigii doorashada. “Alxamdullilaahi” ayuu yiri, tii naxdinta eheed ayaa loogu xijiyey, ee eheed, in wiilkiisii geeriyooday, oo rabshaddaa ku dhintay, wuxuu yiri; Ilaaheey waa i baray sida wiil loo dhalo, balse, waxaa shaki iiga jiray, sidaan doorashada ugu guulaysan lahaa! Ma yaabtay? Yaa is gaaray!
Doorashadii SYL, oo aan SYL tii layaqaannay ahayn ayaa waxay heshay 70 xildhibaan. Ma dhisi karaan xukuumad ay u madax bannaan yihiin, maxaa yeelay, kuraasta ay heleen u ma oggola, marka habeenkii ayaa la mirtay, oo xildibaannadii kale, oo 34 xisbi ka soo galay, ayaa laga gaday, in ay wada noqdaan SYL, subixiina sidaas ayaa dhacday. 123 mudane, oo baarlamaanku ka koobnaa, hal ma ahane, RW hore Cabdirisaaq Xaaaji Xuseen, intii kale waxay noqdeen wada SYL.
Subaxii doorashada 42 qof ayaa geeriyootay, oo dhammaan ku wada dhintay rabshado hareeyey doorashada, oo diidmada bulshada aan la danayn, bal xoog la is ku muquuniyey. Meelahaa waxaa ka mid ahaa Dusmo Reeb, xarunta gobolka Galguduud, haddana ah, caasimadda maamulka Galmudug.
Doorashadaa dilan, duran, ee haddana, dedan, ka dib dilkii MW Cabdirashiid, waxay awoodi waayeen, baarlamaankii buuqa iyo boojada ku yimid, in ay MW is ka dhexdoortaan, oo keentay, in dalka uu ka dhaco afgembi aan dhiig ku daadan, balse, dhiig daadshay, in la is ka daadinaya horseeday, halkaana waxa ku dilmay dimoqoraaddiyaddii curdan eheed, ee dalka ha na qaadday, ee aan Afrika horseedka ugu eheen.
Doorashadii 1979 iyo 1987
21tii gu’, ee Maxamad Siyaad Barre “Aabbaha burburka” uu dalka MW ka ahaa, maalinna ka ma dhicin doorasho mug iyo macne lah. Kaliya waxay eheed fal ku kooban baydka laashinka ee caan baxay;
“Nin dooran doorta xaw dhahdeen, dadkase xaw daaliseen!”
Haddana, waa sooyaale, teliskii keligi telisku wuxuu doorashooyin ku sheeg HAA iyo MAYA ahaa qabtay laba jeer, gugii 1979kii, iyo 1987dii, labadana waxaa tiro dheeri ah lagu doortay MS Barre.
Waxyar ka dib, burburkii dowladdii macangagga, maarso 1991, ayey Muqdisho kooxdii Manifesto Cali Mahdi ugu magacbaabeen MW, halka luulyo 1991kii jabhado isugu tegey Jabuuti, uuse ka maqnaa Gen. Maxamad Faarax Caydiid, dalkana uu wali dhinac ka haystay MS Barre, waxay MM KMG ah ugu doorteen Cali Mahdi Maxamed. Waxaa hortatabiyey kooxdii Manifesto, ee horseedday dagaallada koofurta. Halkaa waxaa lagu aasay riyadii iyo rajadii wadaag dawladnimo.
Dagaalladii sokeeye iyadoo bartanka looga jiro, ayaa 1995tii waxaa magaalada Muqdisho, shir ka dhacay Hoyga Nabadda, qaybo ka mid ah jabadahii MS Barre wax ka riday, qabqablayaal gadaal ka abuurmay iyo dagaal oogayaal, waxay MW ugu doorteen Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid, oo dawladdii loo yaqaannay; SALBARRAAR ayaa halkaa lagu dhisay.
Mar kale, dalka jabuuti, tuuladiisa Carte gugii 2000, shir ay ka qaybgaleen, in ka badan 3000 oo ergo Soomaali ah, isuguna jira qaynbaha ka la duwan ee Bulshada, ayaa lagu unkay Dastuur KMG ah iyo baarlamaan ka kooban 245 Xildhibaan, oo lagu qaybsaday beelo ku salaysan habka 4.5, waxaana MW loogu doortay Cabdulqaasim Salaad Xasan, waxayna noqotay dowladdii u horraysey, ee dunida aqoonsi ka hesha, wixii ka dambeeyey tii meleteriga.
Doorashadii xigtay, 4gu’ ka dib, ayaa shir labo gu’ ugu afduubnaa dalka Kenya kooxaha qabqalayaasha, ee Xabashida ku xirnaa, waxaa lagu doortay baarlaman la raaciyey hannaakii Carta tiro iyo tab ahaan, waxaana doorashdaas ku soo baxay MW Cabdulaahi Yuusuf Axmad. Shirkaa waxaa lagu xasuustaa, in uu ka carooday Cali Mahid, balse, ayaandarro, maalintii ay Xabashidu soo galeen Afgooye, iyagoo Cabdullaahi Yuusuf kaarahooda ku sida, ayuu uga hortagay Afgooye, kuna soo dhaweeyey.
Mar saddaxaad ayaa Jabuuti heshiiskii dhexmaray dowladdii Cabdullaahi Yuusuf iyo ururkii dib u xoreynta soomaaliya, waxaa ka soo baxay baarlamaankii tiro badne, tayo yare, ee ka koobnaa 550 xubnood, oo MW u doortay Shariif Sheikh Axmed.
Doorashadii middan hadda taagan (2016) ka horraysay, waxay dhacday 2012kii, oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ku soo baxay Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana lagu madlanaa, mar walbana la madlaa, in dalka 2016 ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, balse, aan dhici doonin xitaa 50 gu’ ee soo socota.
Taxanahaa sooyaal, ee doorasho, haddaan intaa uga haro, ee aan falanqeeyo midda maanta taagan, ee loogu yeero; Doorashada DADBAN waxay ku jaango’an tahay madax ku sheegga hadda joogta sidii ay ku soo laaban lahaayeen ama ay kuraasta ugu soo bixi lahaayeen rag ay iyagu wataan.
Waxa loogu magac daray; “MADASHA QARAN” “MASHAQO QURUN” ee kulmisa, qabqablyaasha cusub, ee aan qoriga wadan, oo ka kooban; MW Xasan Sheekh, Guddoomiye Jawaari, RW Cumar Cabdirashiid iyo Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada; CabdiWali Gaas, Guuleed, Shariif Xasan iyo Axmad Madoobe, haddana, uu dib uga soo darsoomi doono Cosoble. Kaliya waa lixdii saxal, ee road mapka, oo toddobo saxal kale badaleen. Bal si weydii; maxaa is badalay uu nuxur leh marka laga reebo isbadalka dabiicigaa ee dalka ka socda?
Waxaa la yiraa; “timirtii hore ayaa dab loo la’yahay!” iyadoo 275 xildhibaan naga badan yihiin, dhaqaale iyo mushaarna aan loo hayn ayey ku soo kordhiyeen 54 Senator, oo uu aad ugu adkaystay Cabdi Wali Gaas iyo inta aragtida ah. Dhaqaaleyahan! Dhanka kale, hannaanka doorashada waxaa loo daayey sidii hore ee beelaha, oo ah hannaanka ugu roon marla la fiirsho kuwa kale ee la soo bandhigay.
Tiarada cod bixiyayaasha marka la fiirsho, waxay dhaantaa tii eheed halka qof iyo go’aanka Ugaaska, oo hadda halkii xildhibaan waxaa u codeynaya 51 ergo, oo isugu jirta dhaqan, dhallinyaro haween iyo aqoonyahan. Doorashooyinka waxa loo asteeyey, in ay ka la dhacaan magaalooyinka; Muqdisho, Jowhar, Cadaado, Garoowe, Baydhabo iyo Kismaayo, waxaana maamuli doona guddiga Federaalka ee Doorashada Dadban (FIEIT) oo ka kooban 22 xubnood, ayna wehliyaan guddiyo heer gobol, oo11 xubnood ah. Dhanka kale, waxaa la sii magacaabay Gudiga doorashada 2020. WAALLI! Ku sii shubo iga dheh.
Doorashada DADBAN 2016
Marka, Doorashada DADBAN: Doorashada doollarka, maxaa ka dhigay? Kuwii ka horreeyese, ma ka marnaayeen musuq iyo laaluush? Marka laga reebo, labadii doorasho ee u horraysay, una xalaalsanaa, wixii ka soo hara, dhammaan waxay ku wada suntanaayeen doorasho dilan ama duran. Dilan, oo maba dhicin, sida tii MS Barre oo kale ama labadii Jabuuti ee hore iwm. Duran, oo qaanuun ahaan ama qaab iyo qarash ahaan u duran sida tii 1967, 2012 iwm, wixii ka soo hara waxay u dhexeeyaan labadaa, oo middii Carta, kii Empegathi xoogga qabqablayaasha wixi igaar loo siiyey mooyee dadka caadiga ah qarash badan ka ma bixin, haddana, tan maxay uga soocan tahay kuwii hore?.
Midda ugu weyn, waa in siyaasadda dalka iyo hoggaankiisa, 10 gu’ ee la soo dhaafay ay hayeen WADAADDO magaca ay doonaan ha la haayeene; MAXKAMADO, ALSHABAAB, AALA SHEEKH iyo DAMULJADIID, kii Cartana saamaynta ay ku lahaayeen ay muuqatay, heer Cabdiqaasim uu is ka diiday, in uu gacan qaado, oo salaamo xoghayihii arrimaha dibadda Maraykanka Madeleine Olbrait, hadde ogoow, waa mudanihii wasiir aan dhicin ka ahaa dawladdii hantiwadaagga, ee Waarso xiriirka la leheed! Waa la MURRUGAY!
Musuqa ugu adag sooyaalka doorashada dalka wuxuu dhacayaa gugan, waxaase u jid u ahaa gugii 2012, oo kuraasta qaar lagu gatay lacag ka badan 50kun oo dollar.
Anigu aragti ahaan waxaan qabaa; Wadaaddadu siyaasadda waa fasahaadiyaan, sdia siyaaaddu diinta u fasahaadiso! Taas ayaana sabab u ah, in xubinnimada xildhibaannimada ay lacag iyadoo eheed ay hadda sii noqoto lacago iyo luuluushyo.
Labo tusaale aan halkan ku xiro; (1) rididdii labadii RW ee ka la ahaa Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” iyo Cabdiweli Axmed Shiikh, waxaa ku baxday isu geyn lacag lagu sheego 10milyan, in ay ka badan tahay suuragal. (2) dhismihii Galmudug tartankii la galay, si Guuleed uu u noqdo madaxweynaha maamulka waxaa ku baxday 8Milyan, in ay ka yartahay ama ka badan tahayna suuragal, balse, marba wixii tirsigaa ka agdhaw mar walba waa MAGAG!
Marka, siyaasaddii dhan waxay noqotay yaa beeso wata, iyadoon ewelba hore burhaan gaar ah u lahayn, haddana, tani waa baab laay! U fiirso, kooxda ridid hal qof ku bixisay 5 milyan, meeqo ayey diyaar la yihiin, si ay u soo laabtaan? Sidoo kale, kooxda 8malyan ku bixisay xil u dhiibidda jaalkood, meeqo ayey diyaar la yihiin, si ay u soo laabtaan? Si kale, meeqo ayey bixinayaan, marka ay timaad si ay ku helaan xilka ugu sarreeya dalka mar kale? Tani waxay dhalisay, in qof walba oo tartan geli raba, uu lacagtaa oo kale haddii uusan wadan isaga haro tartanka, marka badi dadka tartamay, marka laga reebo inyar, waxay wada haysteen lacago tooda ah ama dad kale.
Mid waa hubbanti, qof walba, oo xildhibaan noqday amaan noqon, balse, tartamay lacagi waa ka baxday ama baxshay, ee magacyada un baa u ka la duwan; olole, taageero raadin, martiqaad iyo laaluush. Ood qaadis iyo jiidis waa guri geyn. Ma ahan, in aan laaluushka u qiilinayo, balse, qof walba haddii lacagi ka baxday, kan badi baxshay kaliya eeddu qaban maysee, dhammaan ayey qaban. Marna ha sugin doorasho xor ah iyo cod iyo qofkii.
Previous Previous post: Cali Mahdi ma shalaybuu qaldanaa, mise maanta ayuu saxan yahay?!
Next Next post: Disembar; bil murugo iyo gocosho badan!
One thought on “Doorashada DADBAN: Doorashada Doollarka!”
Maxammed Cali Muse says:
Qormo yaab iyo fajaciso intaba leh;
Qormada akhrinteda labey igu qeysantay markaan gagabo ku dhawahay, wixii ka horeyay doorashadii 2000 waxa ay ii aheyd akhrin iyo sheeko sooyaal dhigan, balse wixii ka danbeyay 2000 ilaa hadda waxan u ahaa arke iyo maqle.
Waxase I taabatay sheekadii wiilka iyo aabihii u wada tartamyeen Kursiga ee markii doorashada idlaatay aabihii la yiri War farxadeed iyo war murugo mid kala dooro ee uu yiri ka Farxadda ii hormariya ee la yiri doorashii wad ku so baxday! Farxad Haye murugada ee uu la yiri wiilkagii waxa uu ku dhintay shaqaadadii doorasho ee uu sidaan ogaa ku jawabay!
Doorashadan DADBAN waxan u maleynaa iney sidaas ka dhacdo maxa yeelay waxa inan maqlay an u maleyna in Wiil iyo Aabihiiba ay wada sharaxanyihiin!